ဟဇရတ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ အလ်ဟဂ်ျ နာစေရ် မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး ဟောကြားထားသည့် (اهداف قیام حسینی علیه السّلام ) ၏ မြန်မာ ဘာသာပြန်အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ဇနျနဝါရီ ၆, ၂၀၂၀ - ၁၀:၂၅ ညနေ News Code : 999977 Source : ABNA Link:
اللهُ الَّذِى خَلَقَسَبْعَ سَمَاوَات وَمِنَالاْرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الاْمْرُ بَيْنَهُنَّلِتَعْلَمُواأَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَبِكُلِّ شَىْء عِلْماً
هُوَ الَّذِى جَعَلَالشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَنُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَالسِّنِينَوَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُالاْيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ
وَمَا خَلَقْتُالْجِنَّ وَالاْنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ
لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
إِنَّالصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
كُتِبَعَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ
لِيَشْهَدُوامَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِى أَيَّام مَّعْلُومَات
وَلَكُمْفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الاْالْبَابِ
إِنّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً، وَ لا بَطِراً، وَ لامُفْسِداً، وَ لا ظالِماً، إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاْصْلاحِ فِيأُمَّةِجَدِّي
اَللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ماكانَ مِنّا تَنافُساً في سُلْطان، وَ لاَ الْاتماساً مِنْ فُضوُلِالْحُطامِ، وَلكِنْ لِنُرِىَ الْمَعالِمَ مِنْ دينِكَ، وَ نُظْهِرَالاْصْلاحَ فِي بِلادِكَ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِالْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْفَإِخْوَانُكُمْوَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
وَإِنْ خِفْتُمْشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْأَهْلِهَاإِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّاللهَ كَانَ عَلِيماًخَبِيراً
قَالَ يَا قَوْمِأَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُرِزْقاًحَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْعَنْهُ إِنْأُرِيدُ إِلاَّ الاْاصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِى إِلاَّ بِاللهِعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
وَلاَ تُفْسِدُوا فِىالاْارْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّرَحْمَتَ اللهِقَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
အေစ်လာ(ဟ်)( صلاح)ဆိုသည့်စကားလုံးသည်အဖ်စာ(သ်)( افساد)ဆိုသည့်စကားလုံး၏ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ပေသည်။အဖ်စာ(သ်)ဆိုသည်မှာဖျက်လို၊ပျက်စီးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤဖျက်လိုပျက်စီးသည့်အရေးကြီးပြီးတည်ရှိနေသည့်စနစ်တစ်ခုကိုဖြစ်စေ(သို့)၊တစ်ဦးတစ်ယောက်(သို့)၊မိသားစု(သို့)လူပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း(သို့)၊နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုဖြစ်စေသည့်အတွက်ပြုခြင်းဖြစ်ပေသည်။
စာရိတ္တဖေါက်ပြန်သူများကို( لاِتَمِّمَ مَكَارِمَ الاْخْلاقِ بُعِثْتُ)၏အလံတော်အောက်တွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတည့်မတ်ပေးတော်မူခဲ့လေသည်။
မောင်လာအလီ(အ.စ) ရှဟာဒတ်ဖြစ်တော်မူပြီးနောက်မောင်လာလက်ထက်တွင်ပြဿနာရှာနေသည့်ဟာကင်မ်(အာဏာရှင်)တစ်နည်းဆိုရလျှင်မိုအာဝေယာမွတ်စလင်မ်များ၏ခလီဖွာသမ္မတဖြစ်လာပေသည်။၎င်းအနေဖြင့်ဟဇရတ်(သ) အဘူဗကရ်နှင့်အိုမရ်ကိုခလီဖွာသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံသည့်စည်းမျဉ်း၊နည်းလမ်းကိုလည်းအလေးမထားသည့်အထိကျောခိုင်းခဲ့လေသည်။
اَلنّاسُعَلَى دِينِ مُلُوكِهِم
أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ
ما لِهذا آتَيْتُ، وَلكِنَّكُمْ أَظْهَرْتُمُالْمُنْكَرَ، وَ دَفَنْتُمُ الْمَعْرُوفَ... فَأَتَيْناهُمْلِنَأْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ نَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْاَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَالزَّكاةَ، وَاَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَعَنْ الْمُنْكَرِ،وَاَطَعْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ
وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِيسَبِيلِ اللّهِ، عِنْدَ الاْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِالْمُنْكَرِ، إِلاَّكَنَفْثَة فِي بَحْر لُجِّيٍّ
(စာရှုပရိတ်သတ်များ) သိထားကြသည့်အတိုင်းရီဝါယတ်တော်များဖိုကာအာ(မရ်ဂျယေသက္က်လီးတော်များ)၏သောင်ဇီးဟွလ်မဆာအေကျမ်းများတွင်လာရှိသည့်အတိုင်းအမရ်ဗေမအ်ရူဖ်ဝါနဟီးအဇ်မွန်ကရ်အဆင့်သုံးဆင့်လာရှိပေသည်။၎င်းအဆင့်(၃)ဆင့်အားဂရုပြုရန်အရေးကြီးပေသည်။ရီဝါယတ်တော်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဝစာအေလွရ်ှရှီအာကျမ်းအတွဲ(၁၁)၊အလ်အမရ်ဝါအန်နဟီးကဏ္ဍအခန်း(၃) တွင်လေ့လာနိုင်ပေသည်။
အရေးကြီးသည့်အစ္စလာမ့်သမိုင်းတွင်ကဏ္ဍာများမှတစ်ခုမှာဖြစ်ရပ်မှန်ကရ်ဗလာပြီးနောက်တော်လှန်ရေးများပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။တော်လှန်ရေးများမှာအနှိုင်းမဲ့သောင်ဝါဗီး(န)တော်လှန်ရေး၊မိုခ်သာတော်လှန်ရေးစသည်ဖြင့်ဤတော်လှန်ရေးများအားလုံး၏ညာသံမှာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးထိုညာသံမှာ(لاِلِ مُحَمَّداَلرِّضَا) (အာလေမိုဟမ္မဒ်(အ.စ)၏နှစ်မြို့မှုအတွက်)ဖြစ်ပေသည်။
اَدْعُوكُمْ اِلى كِتابِ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ) صلىالله عليه وآله (فَاِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِيتَتْوَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْاُحْيِيَتْ، وَ اِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلي وَ تُطِيعُوااَمْرِي، اَهْدِكُمْسَبِيلَ الرَّشادِ
اُرِيدُأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّيوَأَبِي عَلِىِّ بْنِ أَبِي طالِب
وَمَا أَمْوَالُكُمْوَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِىتُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًفَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُالضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِىالْغُرُفَاتِ آمِنُونَ
إِنَّأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِىالْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَالطَّيِّبَاتِوَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا
وَمِنَالنَّاسِ مَنْ يَشْرِينَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌبِالْعِبَادِ
وَمِنَالنَّاسِ مَنْيُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَعَلَىمَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِىالاْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا…
ဟဇရတ်(သ) အလီ(အ.စ)အနေဖြင့်နဟ်ဂျိုဗလာဂါကျမ်းရှိနာမေအမှတ်(၅) တွင်အရ်ှအဇ်(စ)ဗင်ကိုင်(စ)၊ထိုအချိန်ထိုကာလတွင်အာဇာဘိုင်ဂျန်မြို့ဝန်အာဏာပိုင်အားမိန့်တော်မူလေသည်။
وَإِنَّعَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَة وَلكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ
أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا يُعْمَلُبِهِ، وَأَنَّ الْباطِلَ لا يُتَناهى عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِاللهِ
أَنزَلَ مِنَالسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌبِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداًرَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَعَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَة أَوْمَتَاع زَبَدٌ مِّثْلُهُكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّاالزَّبَدُفَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِىالاْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الاْمْثَالَ
ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَهُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ
جَاءَالْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً
မေးခွန်း။။ဧကန်မုချအေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ခေတ်ကာလတွင်မြောက်များ စွာသောအမှန်တရားများသည်မေ့လျော့ခံခဲ့ရပြီးအမှားမတရားမှုများမှ၎င်းအမှန်တရားများ၏နေရာတွင်ရောက်ခဲ့ပေသည်။
မိုအာဝေယာအနေဖြင့်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အချုပ်၊အချာ၊အာဏာရှိနေသည့်အ ချိန်ကာလတွင်ကိုယ်တော်၏အစိုးရအားအားနည်း၊အားပျော့စေရန်၊တတိယ ခလီ ဖွာ အွစ်မန်၏လုပ်ကြံ၊ခံရမှုကိစ္စဖြင့်ပြဿနာရှာခဲ့လေသည်။လူထုကိုကိုယ်တော်အား ဆန့်ကျင်၊သွေးဆောင်၊ဖြားယောင်းခဲ့လေသည်။တတိယခလီဖွာအားလုပ်ကြံသူ မျးကိုရှာဖွေပေးရန်၊ဖမ်းချုပ်ပေးရန်၊အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ဂြိုလ်မွေခဲ့လေသည်။
وَبَذَلَمُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ، وَحَيْرَةِ الضَّلالَةِ
ကိုယ်တော်အားတိုက်ရိုက်ပြောလေသည်။အိုအဗာအဗ်ဒွလ္လာဟ်(အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ))! ငါဟာမင်းအတွက်ကောင်းတာပဲလိုပါတယ်။မင်းအတွက်အကြံပေးဖို့ရှိပါတယ်….အကယ်၍လက်ခံခဲ့မည်ဆိုရင်မင်းအတွက်ကောင်းပြီးသင့်တော်ပါမယ်။အေမာမ်(အ.စ)သည်အဖြေပေးမိန့်လေ၏။အသင်၏အကြံဘာလဲပြောပါ? အဖြေပြန်ပြောလေ၏။မနေ့ညကဝလီးဒ်ဗင်အွသ်ဗာထိုင်ပြီး၊စကားပြောထားသည့်အတိုင်းခင်ဗျားအနေဖြင့်ယဇီးဒ်(လ.န)နှင့်ဗိုင်အတ်ပြုပါလေ။ဤအလုပ်ဟာမင်းအတွက်လောကီ၊လောကုတ္တရာအကျိုးရှိမည့်အလုပ်ပါ။
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ وَعَلَىالاْسْلامِ اَلسَّلامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الاْمَّةُ بِراع مِثْلَ يَزيدَوَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ الله )صلى اللهعليه وآله (يَقُولُ: «اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلىآلِ أَبِي سُفْيانَ فَإِذارَأَيْتُمْ مُعاوِيَةَ عَلى مِنْبَرى فَاَبْقِرُوابَطْنَهُ» وَقَدْ رَآهُاَهْلُ الْمَدينَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَبْقَرُوافَابْتَلاهُمُاللهُ بِيَزيدِ الْفاسِقِ
အေဗ်နေအဘီအလ်ဟဒီးဒ်ရေးသားသီကုံးထားပါသည်။မိုအာဝေယာအနေဖြင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိခဲ့ပေသည်။နေ့စဉ်၊နေ့တိုင်း၎င်းထံသွားရောက်တွေ့ဆုံလေသည်။ထိုမိတ်ဆွေသည်မိုအာဝေယာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းထားသူများနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိမ်းထားသည့်(စိတ်ချရသည့်)သာဝကများမှတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ထိုမိတ်ဆွေအနေဖြင့်ပြောဆို၏။(အေမာမ်အလီ(အ.စ)နှင့်အေမာမ်ဟစန်မိုဂ်ျသဗာ(အ.စ)တို့ရှဟီးဒ်ဘွဲ့များခံယူတော်မူပြီးနောက်အစ္စလာမ်ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့လေသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့်မိုအာဝေယာကိုပြောလေ၏။မိုအာဝေယာ! မင်းအနေနဲ့လိုချင်တဲ့အရာကိုရပြီပဲ၊အခုမင်းအစ္စလာမ်မြို့များအားလုံး၏အစိုးရမင်းအာဏာရှင်ဖြစ်နေပြီပဲ၊ဗနီဟာရှင်အပေါ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း၊သတ်ဖြတ်မှုကိုလျော့ပါလေ။ထပ်ပြီးမင်ဗဲရ်များအပေါ်မှအလီ(အ.စ)ကိုဆဲရေးတိုင်းထွာမှု၊လအ်နတ်ပို့မှုကိုမလုပ်ဖို့အမိန့်ပေးပါလေ။မိုအာဝေယာအဖြေပေး၏။မင်းလုပ်တာမှားနေတယ်နော်!ငါအနေဖြင့်ပေးသည့်နေရာများမှမွတ်စလင်များအနေဖြင့်တမန်တော်(ဆွ)၏အမည်ကိုမထည့်သည့်အထိဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်တာ။မှန်တယ်။(ဒါကြောင့်)အဇါန်ပေးသည့်နေရာများမှမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏အမည်ထည့်နေသမျှကာလပတ်လုံးငါစိတ်ချမ်းသာစွာနေနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။(دفناً دفناً)
لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِوَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلِيَقُومَ النَّاسُبِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِإِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ
وَيْلَكَ! اِذالَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدى فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ
بِالْعَدْلِقامَتِ السَّماواتُ وَالاْرْضُ
امّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله(صلىالله عليه وآله )قَدْ قالَ فِي حَياتِهِ: مَنْ رَأىسُلْطاناً جائِراً مُسْتَحِلاّلِحُرُمِ اللهِ، ناكِثاً لِعَهْدِ اللهِ، مُخالِفاًلِسُنَّةِ رَسُولِاللهِ، يَعْمَلُ فِي عِبادِ اللهِ بِالاْثْمِ وَالْعُدْوانِ،ثُمَّ لَمْيُغَيِّرْ بِقَوْل وَلابِفِعْل، كانَ حَقِيقاً عَلَى اللهِ أَنْيُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ
لا فَضْلَ لِعَرِبِىٍّ عَلى عَجَمِىٍّ وَلا لِعَجَمِىٍّعَلى عَرَبِىٍّ وَلا لاِسْوَدَ عَلى اَحْمَرَ وَلا لاِحْمَرَ عَلىاَسْوَدَاِلاَّ بِالتَّقْوى
قُلُوبُ النّاسِ مَعَكَ وَأَسْيافُهُمْ مَعَبَني أمُيَّة
ثَلاثٌمَنْ كُنَّ فيهِ كانَ مُنافِقاً وَاِنْ صامَوَصَلّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ: مَنْ اِذَا ائْتُمِنَ خانَ، وَمَنْاِذا حَدَّثَ كَذِبَ، وَمَنْ اِذا وَعَدَاَخْلَفَ
إذاأقَمْتُ في مَكاني فَبِما يُمْتَحَنُ هذَا الْخَلْقُ الْمَتْعُوسُ؟ وَبِماذايُخْتَبَرُونَ؟
أَمْحَسِبْتُمْ أَنْتُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْوَلَمْيَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَوَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
مَنْ كانَ فِيناباذِلا مُهْجَتَهُ، مُوَطِّناً نَفْسَهُ عَلى لِقاءِ اللهِ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا
يالَيْتَنا كُنّا مَعَكَ فَنَفُوزُ فَوزاً عَظيماً
أَللّهُمَّارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَومَ الْوُرُودِ
وثَبِّتْلِي قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحابِ الْحُسَيْنِ الَّذينَبَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ
اِنَّ لَكَ فِى الْجَنَّةِ دَرَجاتٌلاتَنالُها اِلاّ بِالشَّهادَةِ
၁။အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏တော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်များ ................................................................. ၂။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်ကြီး၏အလုပ်တော်များ၊ရည်မှန်းချက်၊ရည်ရွယ်ချက်များ..................................
၃။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရှုထောင့်မှ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်တော်များ.......................
 ဤဆိုလိုချက်သည် ကဗျာဆရာ၏ ယုံကြည်ချက် ဖြစ်ပေသည်။ပိုမိုပြီး အကျယ်ရှင်းလင်းချက် ကိုမီးရ်ဇကွမ်းမီး ရေးသားထားသည့်جامع الشتاتအတွဲစာမျက်နှာ ၄၆၄ တွင် လေ့လာနိုင်ပေသည်။
ကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာနိုင်ရန် သဖ်စီးရ် နမူနာအတွဲ ၂၂၊အထက်ဖေါ်ပြထားသည့် အာယတ်တော်ဆိုင်ရာ အကျယ် တွင် ကြည့်နိုင်ပါ သည်။(အကြောင်းမှာ ဤခဝပ် ကိုးကွယ်မှုဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသည့် လမ်းမှန် ကိုရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ် (အလ္လာဟ်)နှင့် နီးကပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။)
 بحارالانوار، ج 16، ص 210
 عنكبوت، آيه 45
 بقره، آيه 183
 حج، آيه 28
 بقره، آيه 179
 မိုဟမ္မဒ်ဟနဖီယေအမီရွလ်မိုမေနီ၏သားတော်ဖြစ်ပေသည်။ဟနဖီယေဆိုသည်မှာ၎င်းမယ်တော်၏လကဖ်(ကျော်ကြားသည့်အမည်)ဖြစ်ပေသည်။၎င်းမယ်တော်၏အမည်ရင်းမှာခေါင်လေဂျာအ်ဖရ်ဗင်ကိုင်(စ)၏သမီးဖြစ်ပါသည်။အေမာမ်ရေဇာ(အ.စ) ထံမှလာရှိသည်မှာအမီးရွလ်မိုမေနီ(အ.စ) မိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။မိုဟမ္မဒ်အမည်ပါသူများသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုဖီဆန်ပုန်ကန်မှုပြုခြင်းမှရှောင်ရှားကြလေသည်။ဤမိုဟမ္မဒ်များသည်မည်သူများဖြစ်ပါသနည်းဟုမေးမြန်းလေရာမိုဟမ္မဒ်ဗင်ဂျာအ်ဖရ်၊မိုဟမ္မဒ်ဗင်အဘီဘာကရ်၊မိုဟမ္မဒ်ဗင်ဟိုဇိုင်ဖာနှင့်မိုဟမ္မဒ်ဗင်အမီးရွလ်မိုမေနီဟနဖီယေတို့ဖြစ်ကြောင်းအဖြေပေးတော်မူလေ၏။
သို့သော်၎င်းအနေဖြင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့်အတူကရ်ဘလာမလာသည်မှာယေဘုယျအားဖြင့်ခိုင်လုံသည့်အကြောင်းပြချက်(သို့) မတ်စလဟသ်(ဆင်ခြင်တုံတရားကိုအခြေခံပြီးအခြေအနေအရပြုရသည့်အလုပ်၊လူသား၏အကျိုးအမြတ်အတွက်သာဖြစ်ပေသည်။)အရဖြစ်ပေသည်။ဟဇရတ်(သ) မိုဟမ္မဒ်ဗင်ဟနဖီယေ၏ကွယ်လွန်သည့်ခုနှစ်နှင့်မြုပ်နှံထားသည့်နေရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအကွဲအလွဲရှိပေသည်။အချို့အနေဖြင့်၎င်း၏ကွယ်လွန်ခဲ့သည့်ခုနှစ်အားဟီဂျရီ(၈၀)ခုနှစ်မြုပ်နှံထားသည့်နေရာအားဂျမာလ်လေရဇာဝ်ီဟုဆိုကြပြီးတစ်ချို့ကသွာအေဖ်ဟုဆိုကြလေသည်။
ကြည့်။။( قصّه كربلا، ص)စာမျက်နှာ(၇၁)
 فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 33 و بحارالانوار، ج 44، ص 329
 بحارالانوار، ج 100، ص 80 ; تحف العقول، سخنان امام حسين(عليه السلام)، اوّلين سخن
 အထက်ဖေါ်ပြပါအာယတ်တော်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီးအကျယ်နှင့်အဖမဲ့ကလေးများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်များ၏အာနိသင်များကိုသိရှိနားလည်စေရန်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်(از تو سؤال مى كنند)ကိုလေ့လာဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။
 အစ္စလာမ်သာသနာတော်တွင်လူထု၏အလုပ်များတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတည့်မတ်ခြင်းကိုအထူးအလွန်တရာအလေးပေးထားပေသည်။ဤဆိုလိုချက်ကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်များ၊မာစူမီး(အ.စ)၏ရီဝါယတ်တော်များကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ထင်ရှားစွာသိနိုင်ပါသည်။တန်ဖိုးရှိသည့်ကျမ်းအူစူလေကာဖီအတွဲ(၂) ၊အီမာန်အခန်းလူထုအားအေစ်လာ(ဟ်)ပြုခြင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင်ရီဝါယတ်တော်(၇)ခုလာရှိရာ၊နမူနာဖြင့်ရီဝါယတ်တော်(၁)ခုတည်းသာဖေါ်ပြပြီးတင်းတိမ်လိုက်ပါအံ့။အေမာမ်ဂျာဖရ်ဆွာဒစ်(အ.စ) မိန့်တော်မူသည်မှာ-လူထုအားအေစ်လာ(ဟ်)ပြုပြင်ပြောင်းလဲတည့်မတ်ပေးခြင်းသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးတော်မူသည့်ဆဒ်ကာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
 هود، آيه 88
(ان اريد الاّ الاصلاح ما استطعت)ညာသံသည်ဟဇရတ်(သ)ရှိုအိုက်ဗ်(အ.စ)တစ်ပါးတည်း၏ညာသံမဟုတ်ချေ။အခြားတမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)အားလုံးနှင့်စစ်မှန်သည့်ခေါင်းဆောင်တိုင်း၏ညာသံဖြစ်ပေသည်။၎င်းတို့အားလုံးသည်အပြောအဟောနှင့်အညီလက်တွေ့၎င်းညာသံကိုသက်သေထူပြခဲ့ကြလေသည်။၎င်းတို့(တမန်တော်များ(အ.စ)သည်လူထု၏နှလုံးသားကိုဖျော်ဖြေပေးရန်၊လူထု၏ဂိုနာများကိုခွင့်လွတ်ပလပ်ဖို့ပေးရန်၊ဂျန္နတ်အမတသုခဘုံအားရောင်းချရန်အနိုင်ကျင့်သူများနှင့်ပျင်းရိသူများကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုရန်ကြွမြန်းလာတော်မမူချေ။တစ်နည်းဆိုရလျှင်၎င်းတို့အားလုံး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဘက်စုံပြုပြင်ပြောင်းလဲတည့်မတ်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်ပေသည်။စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွင်အေစ်လာ(ဟ်)၊စာရိတ္တတွင်အေစ်လာ(ဟ်)၊စာပေယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးတွင်အေစ်လာ(ဟ်) နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးတွင်အေစ်လာ(ဟ်)၊ဘက်စုံကဏ္ဍစုံတွင်အေစ်လာ(ဟ်)၊၎င်းတမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)၏ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်ပြီး၊ဤရည်ရွယ်ချက်များကိုပြည့်စုံအောင်နိုင်မှုအတွက်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်ပေါ်သာလျှင်အားကိုးအားထားပြုကြပေသည်။မည်သည့်လုပ်ကြံဇတ်ခင်းမှု၊ခြိမ်းခြောက်မှုမျှမကြောက်ခဲ့ကြချေ။
 شبيه اين مطلب، در آيه شريفه 85 سوره اعراف نيز آمده است
ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အနေဖြင့် နဟ်ဂျိုဗလာဂါကျမ်း ခွသ်ဗာ(၂)တွင် ဂျဟေလီယသ်(အသိဥာဏ်၊ပညာမဲ့မှု၊ရုပ် တု၊ဆင်းတု ကိုးကွယ်မှုကို)ထင်ထင်၊ရှားရှား၊ပြတ်ပြတ်၊သားသား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် ပိုမို၍ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာနိုင်ရန် ဖေါ်ပြပါ ခွသ်ဗာကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။
 بحارالانوار، ج 16، ص 120
 وسائل الشيعه، ج 19، ص 142
မရ်ဟွမ်ရှိတ်ခ်မိုဖီးဒ်(ရ.ဟ)အနေဖြင့် မိမိ၏ကျမ်း အေရ်ရှာဒ်စာမျက်နှာ(၃၅၅)တွင် မိုအာဝေယာ၏ မိန့်ခွန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆင့်ပြန်ရေးသားထားပါသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ကစမ်၊ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အသင်တို့နှင့်စစ် တိုက်ခံရခြင်းမှာ အသင်တို့ နမာဇ်ဝတ်ပြုရန်၊ရိုဇာဆောက်တည်ရန်၊ဟဂ်ျပြုလုပ်ရန်၊ဇကာဒ်ပေးဆောင်ရန်အတွက် မဟုတ်ချေ။ဤအလုပ်များကို အသင်တို့ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်နေပေသည်။ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အသင်တို့နှင့် စစ်ဆင်နွဲ ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသင်တို့အပေါ် အာဏာအုပ်ချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ချေသည်။(အာဏာအချုပ်အခြာရရန်၊ ဖြစ်ပေသည်။)အာရှုရာစာမျက်နှာ(၁၆၂)
 ဤဝါကျသည် (تذكرة الموضوعات)ကျမ်းစာမျက်နှာ(၁၈၃)( كشف الخفاء)ကျမ်းအတွဲ(၂)၊စာမျက်နှာ(၃၁၁)တွင်လာရှိပါသည်။ဟဒီးစ်တော်မဟုတ်ချေ။
 المنتظم، ج 4، ص 179 (حوادث سال 63 هـ . ق) به نقل از عاشورا، ص 217
 بحارالانوار، ج 44، ص 329 ; مقتل خوارزمى، ج 1، ص 188
 بحارالانوار، ج 44، ص 329 ; فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 33
 نهج البلاغه، كلمات قصار، 374
 وسائل الشيعه، ج 11، ابواب الامر والنهى، باب 3
မစ်အူးဒ်ဒီ၏မရ်စဂ်ျဂျိုလ်ဇာအဗ်အတွဲ(၃)၊စာမျက်နှာ(၆၇)အရ ယဇီးဒ်(လ.န)၏တိုတောင်းလှသည့် အာဏာရှင်ခေတ် တွင် သူ၏နန်းတော်သည် ပြဿနာများ၊မကောင်းမှုဒုစရိုက်များ၊ပြစ်မဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ရပ်များ၊အရှက်သိက္ခာမဲ့မှုများ ဂိုနာများ ၏အခြေစိုက်ရဖြစ်နေပေသည်။သူ၏မကောင်းမှုအာနိသင်များမှာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း ကျယ်ပြန့်သွားခဲ့လေသည်။ မည်မျှပင်ဖြစ်သွားသည်ဆိုလျှင် ယုတ်စွ မြင့်မြတ်ကောင်းမြတ်သည့်ဒေသများ ဥပမာအားဖြင့် မက္ကာဟ်နှင့်မဒီနာရွှေမြို့ တော်များ၌ပင် အများစုသည်အပျော်အပါး၊အခြေအမြစ်မရှိသည့်(တရားတော်မှခွင့်မပြုသည့်)ကိရိယာတန်ဆာများ အသုံးပြုခဲ့ကြလေသည်။အာရှုရာကျမ်းစာမျက်နှာ(၂၁၆)။
 ص480 التحفة السنيّة، ص 79; اضواء على الصحيحين، ص 286; و الانتصار للعاملى، ج 6،
မိုအာဝေယာအနေဖြင့် အမရ်ဗင်အာဆ်၊ဇေယာဒ်ဗင်အဘီယေ၊မိုရိုင်ဗင်ရှိုင်အ်ဗာ၊စမရဟ်ဗင်ဂျွန်ဒဗ်ကဲ့သို့သော်(မသူ တော်များကို)အီဂျစ်(ထိုအချိန်ကမြို့)၊ဗစရာမြို့၊ကူဖာမြို့များ၏အုပ်ချုပ်မှုများတွင် ပါဝင်စေခဲ့လေသည်။ဂရုပြုသင့်စရာ၊ အံ့ဩဖွယ်အရာမှာ အမီးရ်ရွလ်မိုမေနီ ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အနေဖြင့် ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ ပြေးမိန့်ခွန်းကို နဲဟ်ဂျိုဗလာဂါကျမ်းနာမေ(စာ)အမှတ်(၆၂)တွင် သတင်းပေးမိန့်ထားကြောင်း တွေ့နိုင်ပေသည်။အ ကျယ်တဝင့် လေ့လာလိုလျှင် အာရှုရာစာအုပ် စာမျက်နှာ(၁၆၃)နောက်ပိုင်းကို လေ့လာနိုင်ပေသည်။
 بحارالانوار، ج 52، ص 302، ح 46 و صفحات 174 و 175 و 178 و 199
 تاريخ طبرى، ج 3، ص 28 ; بحارالانوار، ج 44، ص 340 ; اعيان الشيعه، ج 1، ص 59
 مقتل عوالم، ص 54
 သမ္မတကြီးအွစ်မန်အနေဖြင့်(အစ္စလာမ်တရားတော်အပြင်)ပြဿနာပြုသူများ၊ပျက်စီးသူများ၊ညှဉ်းပန်း၊နှိပ်စက်သတ် ဖြတ်သူများ ဖြစ်ကြသည့် ဝလီဗင်အိုက်ဗဟ်ဗင်အဘီမိုအီ(သွ)ကို ကူဖာမြို့ဝန်၊အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဂါမေရ်ဗင်ဂရေးစ်အား ဗစာရာမြို့ဝန်၊အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်အဘီစာရ်ဟ်ကို အီဂျစ်မြို့ဝန်(အီဂျစ်သည်ထိုအချိန်ကမြို့ဖြစ်ပေသည်။)မရ်ဝန်ဗင်ဟေ ကမ်ကို မိမိ၏အဆင့်မြင့် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ရာထူးမျာပေးခဲ့လေသည်။
အလ်အေစ်သီအာဗ်ကျမ်း၊စာမျက်နှာ(၆၉၀)နှင့်၊အလ်အဂါနီကျမ်းအတွဲ(၆)စာမျက်နှာ(၃၅၆)၊အရဆိုလျှင် အဗူဆိုဖီယန် အနေဖြင့်ခေလာဖသ်သည် မျိုးနွယ်နှစ်စု သီးမ်မျိုးနွယ်(အဘူဗကဲရ်မျိုးနွယ်)နှင့်၊အဒီမျိုးနွယ်(အိုမရ်မျိုးနွယ်)တို့ထံရောက် ချိန်တွင် ကျွန်တော်လည်း ခေလာဖသ်ရဖို့ လောဘတက်ခဲ့သည်ဟု ဝန်ခံပြောဆိုထားလေ၏။
ရီဝါယတ်တော်အရ ဗိုင်အတ်သေရေဇ်ဝန်နှင့် ဗဒဲရ်စစ်ပွဲဝင် တစ်ချို့ပါဝင်သည့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ သာဝက ပေါင်း(၃၀၀)သည် စစ်ဖီ(န)တိုက်ပွဲတွင် အေမာမ်အလီ(အ.စ)နှင့်အတူ လက်တွဲခဲ့ကြလေ၏။ဤသာဝကတော်များမှ (၆၃)ပါးသည် စစ်မြေပြင်၌ ရှဟီးဒ်ဘွဲ့ခံယူခဲ့ကြလေသည်။
 ဂျရ်ဂ်ျဂျရ်ဒါက်အနေဖြင့်မိမိ၏စာအုပ်(الامام على صوت العدالة الانسانية )အတွဲ(၁)၊စာမျက်နှာ((၁၂၄)တွင်ဗနီအိုမိုင်ယာသည်အွစ်စမန်သမ္မတကြောင့်အားကောင်းခဲ့ကြောင်းရေးသားထားပါသည်။အွစ်မန်အနေဖြင့်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍငွေသော့နှင့်ဘုရင်(သမ္မတ)ကိုင်ဓားအားဗနီအိုမိုင်ယာ၏လက်ထဲသို့အပ်ခဲ့လေသည။(အာရှုရာစာမျက်နှာ(၁၄၀)။
သမ္မတကြီးအွစ်မန်၏ စာရင်းအင်းမရှိပေးကမ်းမှုများမှ နမူနာတစ်ချို့ကိုတင်ပြပါမည်။ဂရုပြု လေ့လာပေးရန်မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။
(က)အာဖရိကမှရရှိခဲ့သည့် စစ်ပွဲရပစ္စည်းများမှ တန်ဖိုး၊ဒီနာငွေ(၅)သိန်းတန် တစ်မေစ်ကာလ်အလေးချိန်ရှိရွှေနှင့် ပြည် သူပိုင်ဘဏ္ဍာငွေများမှ တန်ဖိုးငွေဒေရ်ဟမ်(၁)သိန်းငွေကိုလည်းကောင်း၊မရ်ဝန်ဗင်ဟေကန်(မ်)အား ပေးကမ်းလိုက်လေ သည်။ဤအတွက်လည်း ပြည်သူပိုင် ဘဏ္ဍာငွေများသော့ကိုင် ဇိုက်ဗင်အရ်ကမ်အနေဖြင့် စောဒကတက်ခဲ့လေသည်။
(ခ)ဒီနာ(သို့)ဒီရ်ဟမ်(၂)သိန်းအား အဗူစိုဖီယန်ကို ပေးကမ်းခဲ့လေသည်။
(ဂ)အာဖရိကတိုက်ပွဲတစ်ခုမှ စစ်ပွဲရပစ္စည်းများမှ တန်ဖိုး၊ဒီနာငွေ(၁)သိန်းအား ရေဇာအိုင်ရ်ှအဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်အဘီစေ ရဟ်၏ အစ်ကိုအားပေးကမ်းခဲ့လေသည်။
(ဃ) မရ်ဝန်ဗင်ဟေကန်(မ်) အစ်ကိုဟာရေစ်ဗင်ဟေကမ်(န)အားဒေရ်ဟမ် သုံးသိန်းပေးခဲ့လေသည်။
စူရာဟ်ရှိုရာအာယတ်တော်အမှတ်(၁၅)တွင်အထက်ပါစာသားကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။သို့သော်လည်းပဲတမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)၏ ရီဝါယတ်တော်၏စာသားအဖြစ်လည်း အသုံးပြုထားသည်ကို လေ့လာတွေ့နိုင်ပါသည်။မကာသီးဗ်အလ် ရစူလ်ကျမ်းအတွဲ(၂)၊စာမျက်နှာ(၃၃၈)တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
သဖ်စီးရ်ဖစ်ရေရာဇီ၊ရိုဟိုလ်မအာနီ၊အလ်ဒိုရွလ်မန်စူရ်၊မဂ်ျမအိုလ်ဗရန်(န)နှင့်သဖ်စီးရ် နမူနာကျမ်းများတွင်(အထက် ဖေါ်ပြပါ အာယတ်တော်များ၏ သဖ်စီးရ်ဖွင့်ဆိုမှုအောက်တွင်)လေ့လာနိုင်ပေသည်။
 مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 38; شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 16، ص 46
 تحف العقول، ص 174; تاريخ طبرى، ج7، ص 300
 ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အနေဖြင့် နဟ်ဂျိုဗလာဂါကျမ်း ခွသ်ဗာအမှတ်(၂၇)တွင် ဤအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မိန့်ကြားတော်မူထားပေသည်။
 ခွါဂျိုရီအနေဖြင့် စစ်ဖီး(န)စစ်ပွဲတွင် အမီးရွလ်မိုမေနီး ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏သာဝကတော်ပေါင်း(၂၅၀၀၀)ကျ ဆုံး ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊၎င်းတို့ထဲတွင် ဟဇရတ်(သ)အမာရ်ယာစေရ်နှင့်ဗဒဲရ်စစ်ပွဲဝင် သာဝကတော်ပေါင်း ဆွာဟာဗာ တော်ပေါင်း(၂၅)ပါးလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။
 ဇေယာရတ်အရ်ပအီး(န)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တစ်ပါးတည်းအတွက်သာ လာရှိပေသည်။အခြားမအ်စူးမီး များအတွက် မလာရှိချေ။ဤဇေယာရတ်သည် ကျော်ကြားသည့် ဇေယာရတ်တော်များမှ တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ဆင့်ပြန်သူ ရဝီမှာရှိတ်(ခ)သူစီး(ရ.ဟ)ဖြစ်ပါသည်။ဇေယာရတ်ပါစာသား၏အစပထမပိုင်းကို လေ့လာခြင်းဖြင့်(အေမာမ်ဇရီတော်၏) အဝေးမှလည်း ဖတ်နိုင်ပေသည်။(အောက်ပိုင်းပါစာသားများ)အရ အနီးနားမှလည်း ဖတ်နိုင်ပေသည်။ယေဘုယျအား ဖြင့် အနီးမှဖြစ်စေ၊အဝေးမှဖြစ်စေ ဖတ်ရွတ်နိုင်ရန်အတွက် ဆိုလိုထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။သဟ်ဇီးဗိုလ်အအ်ကာမ်-ရှိတ်(ခ)သူစီး(ရ.ဟ)၏အတွဲ(၆)၊စာမျက်နှာ(၅၂)နှင့်အတွဲ(၃၇)တွင် ဤဇေယာရတ်တော်အား အေမာမ်ဟစန်အစ္စကရ် ရီ(အ.စ)မှ ဆင့်ဆိုထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။
 မရ်ဝန်ဗင်ဟေကမ်သည် တတိယသမ္မတအွစ်မန်၏ ညီအစ်ကို၊တစ်ဝမ်းကွဲနှင့် သားမက်တော်ပြီး အဆင်မြင့် အတိုင် ပင်ခံဖြစ်ပေသည်။ဟဇရတ်ရစူလ်လေခိုဒါ(ဆွ)အနေဖြင့် မိမိ၏သက်တော်ထင်ရှားရှိနေစဉ် သူအား၊မဒီနာရွှေမြို့တော်မှ နယ်နှင်ဒဏ်၊ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးတော်မူခဲ့လေသည်။သူ၏ဒုစရိုက်များ၊မသန့်ပြန့်သည့်လုပ်ရပ်မှု၊ရာဇဝင်များ ရှိပေသည်။ဤ အကြောင်းကို မရ်ဟွမ်အလာမာအမီနီ(ရ.ဟ)အနေဖြင့် မိမိ၏တန်ဖိုးရှိသည့်ကျမ်း၊အလ်ဂဒီးရ်အတွဲ(၈)၊စာမျက်နှာ (၂၆၀)နောက်တွင် တင်ပြသီကုံးထားပါသည်။
 لهوف، ص 20; ومثيرالاحزان، ص 10
 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 5، ص 130 ; و ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج 1،ص 376
 အကျယ်တဝင့်သိနိုင်ရန် ကေသာဗေအာရှုရာကျမ်း၊စာမျက်နှာ(၂၃၁)နောက်ပိုင်း လေ့လာရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါ သည်။
 جواهرالكلام، ج 20، ص 46-48 ; و ج 41، ص 344 و 345
 အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ရှဟီးဒ်ဘွဲ့ခံရယူမှုသည် ထိုနေ့အာရှုရာနေ့အတွင်း မွတ်စလင်များကို နိုးဆော်စေခြင်းကို စတင်ခဲ့လေသည်။သွေးကြေးပြန်ဆပ်ဖို့ (အသံကို ရန်သူတပ်သားများမှ တပ်သားတစ်ဦး၊ဇနီးသည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ဗက်ရ် ဗင်ဝါအေလ် မျိုးနွယ်လည်းဖြစ်သူမှ စတင်ခဲ့လေသည်။သူမသည်(ယာ(စ)စာရာသေရစူလ်လ္လာဟ်)ဆိုသည့်အသံဖြင့် လူထုအား(မွတ်စလင်များအား)အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား သတ်ဖြတ်ရက်စက်ခဲ့ရသည့် လူသတ်သမားများကို သွေးကြွေးဆပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ် စည်းရုံးခဲ့လေသည်။ပြီးနောက်ဆက်တိုက် တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသည်။ နောက်ဆုံး ဗနီအိုမိုင်ယာ၏အစိုး ရပြုတ်သွားလေတော့သည်။ (စိုက်နာမေအာလေမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)စာမျက်နှာ(၅၃၃))
 အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်ဆွာဒစ်(အ.စ)၏ရီဝါယတ်တော်တစ်ပါးအား ကျွန်တော်တို့ လေ့လာဖတ်ရှုကြမည်။
لم یبعث الله نبیاً قط الا بالبر والعدل ...အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် မည်သည့်နဘီတမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)ကို ပြည်သူလူထုအတွက် ကောင်းမှု၊ကောင်းရာကို ညွှန်ကြားပြီး၊အဒါလသ်(ခ)တရားမျှတမှု၊ကျောသား၊ရင်သားမခွဲခြားမှု၊ ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ပေးခြင်း၊စသည်ဖြင့် တာဝန်ရှင်များအပြစ်မှအပ မစေလွတ်တော်မူခဲ့ချေ…
 بحارالانوار، ج 21، ص 161
အေဗ်နေအဘီအလ်ဂျွန်ဟူရ်အမ်ဆာရီအနေဖြင့် အထက်ပါဝါကျတော်အား မိမိ၏စာအုပ် အဝါလီအလ်လေအာလီ အတွဲ(၄)၊စာမျက်နှာ(၁၀၃) တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မှတဆင့် ဆင့်ဆိုရေးသားထားပါသည်။
ابن ابى الجمهور احسايى جمله مذكور را در كتابش عوالى اللئالى، ج 4، ص 103 بهنقل از رسول اكرم)صلى الله عليه وآله (نقل كردهاست
 بحارالانوار، ج 44، ص 382
 ( تفسير نمونه، ج 22، ص 209 (چاپ جديد
 ပိုမိုပြီးအကျယ်တဝင့် အကြောင်းအရာကို လေ့လာနိုင်ရန် ကေသာဖ်အာရှုရာ စာမျက်နှာ(၁၃၄)၊နောက်ပိုင်း ဖတ်ရှု၊ မှတ်သား နိုင်ပါသည်။
 အေဗ်နေအဘီအ်ဟဒီးဒ်အနေဖြင့် မိမိ၏ရှရ်ဟေနဟ်ဂျိုဗလာဂါကျမ်းအတွဲ(၁၁)၊စာမျက်နှာ(၄၄)တွင် ရေးသားထားပါ သည်။မိုအာဝေယာအနေဖြင့် မြို့ဝန်များထံစာရေးပို့ခဲ့လေသည်။စာ၏ ကဏ္ဍအချို့မှ အားလုံးကိုအမိန့်ပေး ထုတ်ပြန် ထားလေသည်။ဟဇရတ်အွစ်မန်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးသူများ၊၎င်း၏ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ကြောင်း တင်ပြသူများကို အစိုးရ ဌာနများ၏အနီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် သတ်မှတ် ပေးပါလေ။ဂုဏ်ပေးပြီး အထူးလေးစားမှုကို ပြုခဲ့ပါလေ။အကယ်၍ အကြင်မည်သူမဆို ဟဇရတ်အွစ်မန်၏ဖဇီလသ်(ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု)ကို တင်ပြမည်၊ဆင့်ပြန်မည်။ထို့ပြင် ၎င်းတင်ပြသူ အား မိမိ၏အမည်၊မိမိဖခင်အမည်၊ဆွေမျိုးသားချင်းအမည်ကိုပါ ရေးသားခိုင်းပါလေ။ထိုမှသာ၎င်းတို့အားလုံး(ငါမိုအာဝေ ယာ)ဆုလာဘ်ချီးမြှင့် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။
ဤစာပါကဏ္ဍအချို့ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့လေသည်။ရလာဒ်မှာ ဆုလာဘ်တော်များ၊ဆုငွေများ အမြေက်အများကို ပြည်သူလူထုအကြားချီးမြှင့်ခဲ့လေသည်။ဤသို့ဖြင့် နောက်တဖန် စာရေးသည်အထိနှစ်အတော်ကြာ ဤအတိုင်းဆက်သွယ်မှု၊ဆက်ဆံမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့လေ၏။(နောက်တဖန်ရေးသည့်စာမှာဖဇာအေလ်နှင့်မိုနာကစ်ဗ်အွစ်မန် အမြောက်အများ ရှိလာပေသည်။ပြီးနောက် လူထုထံမှအခြားသာဝကတေ်၏ ဖဇအေလ်အား တောင်းတပေသည်။အ ထူးသဖြင့် ခလီဖာသမတ္တနှစ်ဦးအတွက် ဟဒီးစ်များရေးသားစေခဲ့ပြီးဟဇရတ်အလီ(အ.စ)၏ ဖဇီလာသ်အတွက် လာရှိ သည့် ဟဒီးစ်တော်မှန်သမျှအား အရှေ့တွင် သာဝကတစ်ပါးပါးကို ဟဇရတ်အလီ(အ.စ)၏ ဖဇီလာသ်အတိုင်း(လုပ်ကြံ) ဟဒီးစ်ကိုရေးစေခဲ့လေသည်။
ယဇီးဒ်(လ.န)၏ဇိုလ်မ်နှင့် ရာဇဝတ်မှုများ ဤမျှကြီးထွားလာသည် ဆိုသည့်အကြောင်းကို ကျော်ကြားသည့်သမိုင်းစာ ရေးဆရာမစ်အူးဒ်ဒီအနေဖြင့် မိမိ၏စာအုပ် မိုရိုဂ်ျဂျိုဇ်ဇဟ် အတွဲ(၃)၊စာမျက်နှာ(၆၈)တွင်ရေးသားထားပေသည်။ယဇီးဒ် (လ.န)၏ ဘဝတည်ဆောက်ပုံမှာ ဖေရ်အောင်(လ.န)ကဲ့သို့ ပင်တည်း။သို့သော် တစ်နည်းအားဖြင့် မလွဲမသွေဆိုရလျှင် ဖေရ်အောင်(လ.န)သည် လူထုအကြား ယဇီးဒ်(လ.န)ထက်ပိုပြီး တရားမျှတစွာ ဆက်ဆံခဲ့ပေသေးသည်။
 حارالانوار، ج 44، ص 365
 لهوف، ص 260
 ميزان الحكمه، باب 3931، ح 20577
 لهوف، ص 67 ; بحارالانوار، ج 44، ص 331
 بحارالانوار، ج 44، ص 367
 قصّه كربلا، ص 90 و 91
 بحارالانوار، ج 44، ص 313 و 328